काठमाडौं। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले बालुवा पेलेर तेल निस्किनु र केपी ओली सुध्रिनु एउटै भएको टिप्पणी गरेका छन्। काठमाडौंमा शनिबार आयोजित शिक्षकहरूको राष्ट्रिय भेलामा अध्यक्ष नेपालले अहिले पनि वामदेव गौतमले केपी ओलीलाई सुधार्ने कोसिस गरिरहेको बताए।
उनले भने, ‘दुई तिहाइको संख्यामा भएको ठाउँमा उहाँले तुरुन्तै भङ्ग गरिदिनुभयो। किन भङ्ग गरिदिनुभयो भने मलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने भए भनेर। यो प्रधानमन्त्री हटाउने को हो थाहा छ ? वामदेव गौतम हो। फेरि उहाँ (प्रचण्ड)लाई दोष जान्छ सबैभन्दा बढी होइन, साँचो कुरा म तपाईंहरूलाई बताउँछु। यो पहिलो प्रस्ताव राख्ने केपी ओली मान्छे खराब मान्छे हुन् भनेर स्थायी कमिटीको बैठकमा भाषण गर्नुभएको छ वामदेवले। ४० मिनेट भाषण गर्नुभयो केपी ओली जस्तो रद्दी मान्छे धर्तीमा कोही पनि छैन भनेर। अब अहिले पनि उहाँ फेरि कोसिस गर्दै हुनुहुन्छ केपीलाई सुधार्न। अब उहाँ गर्नुहोस् मैले भनेको छु यो बालुवा पेलेर तेल निस्किँदैन कोसिस गर्नुहोस्।’
उनले भने, ‘केपी ओली यो तरिकाले जाँदा पार्टीभित्र उहाँले छलफल बहस बन्द गर्नुभयो। बैठक त्यहीँ छ बालुवाटारमा, बालुवाटार बाहिर कहीँ नजाने मान्छे अहिले हेर्नुहोस् त फूर्ति कहिले कहाँ पुग्या छ कहिले कहाँ पुग्या छ। बैठक भनेपछि धुम्बाराहीमा नआउने मान्छे अहिले त कुद्या छ कुद्या छ। भनेपछि पार्टीलाई कति मर्यादित ठानेको। आफ्नो पूरै पछिपछि लाग्नुपर्छ भन्ने प्रवृत्तिको कति पक्षपोशण भएको कुरालाई पुष्टि गर्दैन त्यसले। त्यसैगरी त्यहीँ निवास छ, बेडरूम छ, त्यहीँ बैठक बसेको छ बैठकमै नआउने। बैठकमा ल्याउनका लागि प्रचण्डले बैठक छोडेर जाने फेरि, कहिलेकाहीँ हामीलाई पनि सँगै जाऊँन भन्ने। एउटाको शक्तिले पुगेन र दुई वटाले सकिन्छ कि भनेर। यस्तो ज्याद्रो मान्छेलाई हामीले चलाउन सकेनौं।’
अहिले केपी ओलीलाई बिदा गरेजस्तै ओली प्रवृत्तिलाई पनि सबैले त्याग्नुपर्ने बताए। अहिले सबै क्षेत्रबाट नेताहरूलाई ओली प्रवृत्ति त्यागेर अगाडि बढ्न सुझाव आएको पनि अध्यक्ष नेपालले बताए।
उनले भने, ‘केपी ओलीलाई बिदा गर्‍यौं। केपी प्रवृत्तिलाई हामीले बिदा गर्ने कि नगर्ने ? अहिलेका नेताहरूलाई चेतना भया भनेर हामीलाई पनि भन्ने गर्नुहुन्छ। पत्रिकामा पनि पढ्दै थिएँ । होस गर्नुहोस् है तपाईंहरूमा पनि केपी प्रवृत्ति नउदाओस्। हामी अवश्य पनि सतर्क छौं।’